कथा-टुक्रिएको सपना « Sansar News -->
१८ बैशाख २०७८, शनिबार ०६:४५
‘म त तिम्रो अभावमा पानी बिनाको माछो झैं छट्पटिएको छु ।’ – मैले जवाफ दिएँ ।
‘मैले के दिनु र तिमीलाई चोखो माया बाहेक ? जागिर छैन व्यापार छैन । बरु तिम्रो केक खान आउँला नि है हुन्छ ?’ हाम्रो कफी शपमा निकै गफ भयो । कुराकानीको अन्तमा जन्मदिन मनाउनको लागि आफ्नै घरमा बोलाईन् ।
एकपालीको दशैंमा घर जाँदा चिनजान भएकी उनीसँग गहिरो पिरतीमा परेँछु म त । मलाई उनले सोझो र भलादमी लाग्यो रे त्यसैले मनदेखि नै तिमीलाई मन पराएँ तर तिमी र मसँगै हुनको लागि वैज्ञानिक ढंगले मात्र हुन सँगै हुन सक्छौ नत्र परिवारकी कान्छी छोरी अस्ति मात्र नेपाली सेनाका सेनानी थापा थरको एकजना माग्न आएको थियो तर मैले मानिनँ । यसरी कुरा हुन्थ्यो हाम्रो, उनलाई मैले कोठा भाडा तिर्नलाई ठिक्क पारेको पैसाले न्युरोडमा गएर ईटालियन ब्रान्डको जुत्ता उपहार ल्याई दिएँ किनभने राम्रो ब्रान्डको जुत्ता र कपडा लाउन सौखिन थिइन् गोरी र सर्लक्क मिलेको शरीर टक्क कपडा लाएसी जेनिफर लोपेज जस्तै मान्थे मैले ।
‘तिमीले कोठा भाडा तिर्नुपर्छ, खानु पर्यो, ट्युसन फि र साथीभाईसँग चिया खाजा खानु पर्यो मैले त जिस्किएको मात्र यति महंगो चिज किन ल्याएका नि ? उनले हकारिन् । मैले कुरा मिलाएँ दिनहरु बित्दै गए ।
हाम्रो विवाह त कठिन थियो । जात, स्तर फरक थियो त्यसैले हामीले विवाहका लागि बेग्लै आधार बनाउनु पर्थ्यो । उनी अष्ट्रेलियामा एमबिए गर्न हामी दुवैको सल्लाह अनुसार जाने निश्चित भयो त्यसपछी उनकै पहलमा जान सक्ने भएँ र विवाह गर्न सजिलो हुने भयो ।
सहमति बमोजिम मोनिका युनिभर्सिटी या न्युसाउथ वेल्स मेलबर्नमा पढ्नलाई गइन् ।
हाम्रो प्रायः सधै कुरा हुन्थ्यो म पनि एक बर्षभित्रमा विवाह गरेर जानको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै थिएँ ।
उनी दुर्घटनामा पर्दा म पनि उनीसँगै परेँ झै भयो मेरो जीवनको रहरहरु खुशीहरु उनीसँगै गयो । लेखान्तमा जीवन अडेको छ हामी त पात्र रहेछौ निर्देशन त भगवानले नै गर्दोरहेछ । टुक्रियो सपना मेरो त्यो दिनदेखि । लाग्न थाल्यो खुशी त अब यो जुनीमा हुन्न होला ! मन परेको मान्छे, मैसामु नरहे पछि बाँचेर पो के गर्न सक्छु र ? उनको यादमा परे पछि यस्तै हुन्छ आजभोली मलाई । त्यसैले दिक्क लाग्छ होलीको दिन ।
फुटेको काँच जस्तै भाग्य फुटेपछि
बाँंच्नु पनि के बाँंच्नु घायल मुटु लिएर